Kungani isikhombisi segundane sikhona?
Ngenkathi usebenza kwikhompyutha, ungase uhlangabezane nenkinga efana nokulenga, ukugcoba, noma ukunyamalala isikhombisi segundane. Lokhu kungachazwa ukuthi idivayisi ngokwayo ayiphutha noma isofthiwe ihlulekile.
Uma i- cursor yegundane ikhululeka , into yokuqala efika engqondweni ukuhlola ukuthi ifoni yedivayisi ifakwe kahle kwinethiwekhi yomshini. Kungenzeka ukuthi i-port ye-USB ayiphutha, lapho igundane lixhunyiwe khona, ngakho-ke udinga ukuzama ukufaka ipulagi kwenye ixhuma. Ukuze uqinisekise ukuthi idivayisi ngokwalo ayiphutha, udinga ukuthatha elinye igundane bese uhlola ukuthi i-cursor isehamba kanjani lapho isebenza nayo.
Ngokuvamile kwenzeka ukuthi isikhombisi segundane sinyamalale lapho izinto zangaphandle, izinwele zezilwane, uthuli lingena esikhungweni se-optical. Uma bengenakukwazi ukususwa ngokuphelele, igundane kumele lihlanjululwe futhi lihlanzwe. Ukuze wenze lokhu, vula isikrini esisodwa bese ususa ikhava ephezulu. Kudingeka ukususa konke ukungcola ngaphakathi, ikakhulukazi endaweni lapho igoli liwela khona.
Uma igundane lingenantambo, udinga ukuqinisekisa ukuthi amabhethri awafi futhi ahlole izinga lesignali. Ukusebenza kwe-pointer kungaphazamisa izibonakaliso zamanye amadivaysi axhunywe ngezindiza ze-USB. Kuleli qophelo, isikhombisi segundane siqhwaza, asisabele ngokunyakaza, noma siyanyamalala ngezikhathi ezithile, kubonakala. Kulokhu, kufanele uxhume amadivaysi, isibonelo, i-modem ye-USB negundane, kusukela ezinhlangothini ezahlukene zekhompyutha. Kunconywa ukugcina amafoni weselula kude ne-PC esebenzayo.
Uma unciphisa isikhombisi segundane, akusho ukuthi idivayisi ngokwayo ayilungile. Mhlawumbe kudingeka nje ukwandise ijubane le pointer. Ukwenza lokhu, faka "Iphaneli Yokulawula" ngokusebenzisa "Qala" futhi uvule ithebhu yemingcele kuzilungiselelo zegundane. Lapha ungashintsha isivinini sesikhombisi ngokuqaphela kwakho, ngenkathi ugcina izilungiselelo.
Ukuhambisa isikhombisi segundane kungenzeka ngenxa yokulimala kwegciwane kumafayela wesistimu. Kulolu cala, kufanele ususe umshayeli we- USB kusuka ku "Iphaneli yokuLawula" esigabeni esithi "Engeza noma Susa Izinhlelo" bese uyifaka. Ungathola umshayeli we-USB kuyi-intanethi noma ulande kusuka ku-disk ethengiswa ngegundane. Ngemuva kokubuyiselwa, kumele uqalise kabusha ikhompyutha bese uhlola ukusebenza kwedivayisi.
Isikhombi segundane singase sinyamalale noma singaphenduli ukunyakaza ngenkathi sisasebenza kusiphequluli. Uma lokhu kwenzeka kuphela kusiphequluli, okokuqala kuzomele uzame ukuyibuyisela. Uma ngabe kukhona okushintshile, cishe, kungenzeka ukuthi inkinga iku-Adobe Flash Player ye-plug-in, ngakho-ke kuphakanyiswa ukuthi kufakwe esikhundleni senguqulo endala ngenye entsha. Ngaphezu kwalokho, ungakhubaza ama-plug-in kuzilungiselelo zesiphequluli, kodwa ke kumasayithi awuboni izithombe ze-flash.
Kwenzeka ukuthi isikhombisi segundane sixhomeke lapho izinqubo eziningi zisebenza kwikhompyutha, ezithwala kakhulu inkumbulo kanye neprosesa. Kulesi simo, kunconywa ukukhubaza izinqubo ezingadingekile futhi ususe ekuqalisweni okuzenzakalelayo.
Ngezinye izikhathi inkinga yokudweba isikhombisi ingaxazululwa ngokubuyisela abashayela bekhadi lesithombe, esikhundleni sabo ngezinguqulo ezintsha.
Kwezinye izimo, i-hang ye-cursor ingase ibe ngenxa yokusebenzisa izinketho ze-animated. Ukuqeda inkinga, udinga ukukhetha uhlobo olujwayelekile lwe-cursor.
Indlela yokususa unqulo wesi arab kanye nazo zonke izingxenye zayo
Indlela yokuvula amathebhu wangasese. Indlela yokuvula ithebhu evaliwe ngokungahleliwe "ku-Chrome", "i-Opera" ne "Mozilla"
Amadolo ubuhlungu - yini okumele ngiyenze?
Fuld - Imfanelo ka ubufazi, noma igcizelelwa ubuntu?